သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ ( ပါဏာတိပါတာ – – – ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ ( ပါဏာတိပါတာ – – – )
သီလပုံစံဖြည့်ကြပါ ( ပါဏာတိပါတာ – – – )
Posted by ကိုငြိမ်းအေး on Oct 1, 2011 in Buddhism, Critic, Opinion - Op-ed | 55 comments
သီလ (ကိုယ်ကျင့်တရား) ဆိုတာ လူသားတွေ ငြိမ်းအေးဖို့အတွက် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမယ့် သဘောတရားတွေပါ။ ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ ယေရှုခရစ်တော်တို့ မပေါ်ခင် ကာလကတည်းက လူသားတွေဟာ ကိုယ့်ဒေသ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအလိုက် ပတ်ဝန်းကျင် ငြိမ်းအေးစေဖို့ သီလ (စည်းကမ်း)တွေ သတ်မှတ်ကျင့်သုံးနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သီလဆိုတာ ဘာသာရေးတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင် တာပါ။ လူသားတွေ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာ ငြ်ိမ်းအေးစေဖို့ လိုက်နာနေကြ တဲ့ သီလ (စည်ကမ်း) တွေက ယေဘူယျအားဖြင့် (၅)ချက်ကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီ (၅) ချက်က
၁။ အသက် (ပါဏ) လို့ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်မှုတွေကို မဖျက်ဆီးရခြင်း။
(ပုံစံအားဖြင့် သတ္တ၀ါ(လူ) အသက်ကို မသတ်ရခြင်း)
၂။ မိမိ မရသင့်၊ မရထိုက်သော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့အား မယူဖို့ (အဒိန္နဒါနာ – – -))ကို စောင့် ထိန်းရခြင်း။ (ပုံစံအားဖြင့် သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို မခိုးရခြင်း)
၃။ သူတစ်ပါးရဲ့ ကာမအာရုံ (ကာမေသု)အား အလိုမတူ မပြုရခြင်း။
၄။ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် လှည့်ဖြားမှု (မုသာဝါဒ) ကို မပြုရခြင်း။
(ပုံစံအားဖြင့် မဟုတ်၊ မမှန်စကား မပြောရခြင်း)
၅။ ယစ်မူးစေတဲ့အလုပ်တွေမှာ သတိမေ့လျော့စေတဲ့
(သုရာမေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ)အထိ သုံဆောင်မှီဝဲမှုကို မပြုအပ်ခြင်း။ (ပုံစံအားဖြင့် အရက်သေစာ မသောက်ရခြင်း)
စသည်တို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီငါးချက်ကို ကျူးလွန်ရင် ကျူးလွန်သူရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပါ မငြိမ်းအေးဘူး၊
မကျူးလွန်မိအောင် စောင့်ထိန်းရင် ငြိမ်းအေးမယ် စသည့် အကြောင်းအကျိုးများဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ လူသားတွေ ငြိမ်းအေး စေဖို့အတွက် အခြေခံအားဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့ အချက် (၅)ချက်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ နမူနာပုံစံနဲ့ ကိုယ်အမှန် တကယ်ကျင့်သုံးရမယ့်အချက်ကို ကွဲပြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့သတ်ဆိုင်တာကို မကျင့်သုံးပဲ ပုံစံထဲက အတိုင်း လှေနံဓားထစ် တစ်မျိုးထဲ ကျင့်သုံးနေကြမယ်ဆိုရင် အကျိုးများ နိုင်ကြပါ့မလား – – – – — ။
ဥပမာ – – -ရုံးတစ်ရုံမှာ အချက်အလက် ပုံစံ(form) စာရွက်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ နမူနာအနေနဲ့ ပုံစံ ဖြည့်ထားပေးသော စာရွက်၌
အမည် – – – – – မောင်လှ
အဘအမည် – – – – – ဦးဘ
အလုပ်အကိုင် – – – – – ဈေးရောင်း
စသည်တို့ကို ကိုယ့်ပုံစံစာရွက်၌ ဖြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိုယ့်အမည်၊ အဘ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်ကိုသာ ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို ပုံစံ စာရွက်မှာ
နမူနာဖြည့်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ကပုံတူကူးချဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ပုံစံစာရွက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကာတွန်းဆရာအော်ပီကျယ်က သူသား စာကျက်တဲ့အခါမှာ ကျနော်၏ဖခင်မှာ ဦးဘ ဖြစ်ပါသည်လို့ စာကျက်သံကြားတော့ သူသားကို “သား ဖေဖေ့နာမည်က ဦးဝင်း နိုင်လေ၊ ဦးဘ မဟုတ်ဘူး၊ ကာတွန်း အော်ပီကျယ်လို့လည်းခေါ်တယ်”ဟု ပြောသည့် အ ခါ သားဖြစ်သူက “အဖေ၊ ကျနော့် အဖေ တစ်ယောက်ထဲ ဦးဘမဟုတ်ဘူး၊ တစ်တန်းလုံး အဖေတွေ ဦးဘပဲဗျ” လို့ ပြန်ပြောလေ၏။ ကာတွန်းဆရာအော်ပီကျယ်က “ဦးဘ၊ ငါ တို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်မှာ တော်တော်မွှေသွားတာပဲ“ဟု စာပေဟောပြောပွဲ၌ ပြောခဲ့ လေ၏။
စာသင်ကျောင်းများက နမူနာပုံစံတွေသာ သင်ပေးလိုက်လေသည်။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပုံစံတွေဖြည့်တတ်ဖို့တော့ မသင်ပေးလိုက်ကြပါလား။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ် အမှန်တကယ် လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာတွေကို မသိတော့ပဲ ပုံစံထဲကအတိုင်းပဲ လုပ်တတ်ကြကုန်၏။
ဥပမာအားဖြင့် – – – သူများနိုင်ငံခြားသွားရင်၊ ကိုယ်ပါလိုက်သွား။
သူများဟိုဟာလုပ်၊ ကိုယ်လိုက်လုပ် – – – ဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ သင့်လား၊ မသင့်လားမသိ၊ မဝေဖန်နိုင်၊ သူများဖြည့်ထားတဲ့ ပုံစံတွေမှာသာ ကိုယ့်ပုံစံလို လိုက်ဖြည့်နေကြပေသည်။
အစလွဲတော့ အနှောင်းမသေချာဟုဆိုသလို ဘ၀မှာ ငြိမ်းအေးစေဖို့အတွက် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမယ့် သီလဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလည်း နမူနာ ပုံစံလောက်သာ ကျင့်သုံးနေကြတာကို တွေ့နေရပေသည်။
နံပါတ် (၁) အသက် (ပါဏ) လို့ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်မှုတွေကို မဖျက်ဆီးရခြင်းမှာ
သတ္တ၀ါ(လူ) အသက်ကို မသတ်ရခြင်းဆိုတဲ့ နမူနာပုံစံမှာ ဘာ့ကြောင့် မသတ်သင့် တာလဲဟု စိစစ်ဖို့လိုပေ၏။ လူသားတွေဟာ အချင်းချင်း သတ်ဖျက်နေကြမယ်ဆိုရင် လူ့လောကဟာ ငြိမ်းအေးနိုင်ပါ့မလား။ ဒါ့ကြောင့် လူငြိမ်းအေးမှုကို ထိခိုက်စေတာမို့ အသက် (ပါဏ) လို့ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်မှုတွေကို မဖျက်ဆီးကြဖို့ နမူနာပုံစံမှာ သတ္တ၀ါ(လူ) အသက်ကို မသတ်ရခြင်းဟု ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ လူတင်ပဲလား၊ ကျန်တဲ့အရာ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကော မပါဘူးလားဟု ပြန်မေးဖို့ကောင်းလေ၏။
နမူနာပုံစံအနေနဲ့သာ သတ္တ၀ါ(လူ) အသက်ကို မသတ်ရခြင်းလို့ ဆိုရပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အသက် (ပါဏ) ဆိုတာ လူအသက် တစ်ခုတည်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှုအားလုံးကို အသက် (ပါဏ)ဟု သဘောပေါက်ထားပေးဖို့ လိုပေ သည်။ လူ့အသက်ဆိုတာ နမူနာပုံစံအနေနဲ့ ဖြည့်ထားပေးတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ ပုံစံနဲ့တင် ရပ်နေတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်အမှန်တကယ် မဖျက်ဆီးရမယ့် အသက် (ပါဏ)တွေကို ပုံစံဖြည့် ကျင့်သုံးလိုက်နာတတ် ဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ၂၀၀၇-ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်းများ စွာ သေကြေပျက်ဆီးခဲ့ရ၏။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ပျက်ဆီးရသလဲဟု ပညာရှင် များ စိစစ်ကြတဲ့အခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့ရဲ့ ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှု အသက် (ပါဏ) ပျက်စီးသွားလို့ဟု တွေ့ရပေသည်။ ဒီရေတောများကို လိုအပ်တဲ့ ပမာဏထက် ခုတ်ထွင်ခြင်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့် ဆက် နွယ်နေမှု (ဂေဟစနစ်) ပျက်ယွင်းသွားသည့်အတွက် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ ဖြစ်ပေါ် လာကာ မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်လာလို့ လူသားတွေ ဒုက္ခရောက်ရခြင်းဖြစ်ပေ၏။
ဒါ့ကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လူသားတွေသေဆုံးရခြင်း၏အကြောင်းမှာ ဒီရေတောများကို လိုအပ်တဲ့ပမာဏထက် ခုတ်ထွင်ခြင်းမျာပြုသည့်အတွက့် နံပါတ် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရား (သီလ) ဖြစ်သည့် အသက် (ပါဏ)လို့ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်မှုတွေကို မဖျက် ဆီးရခြင်းကို မလိုက်နာသည့် အကြောင်းကြောင့်ဟု ပုံစံဖြည့် နားလည်ပေးဖို့လိုပေသည်။
ဒီနေရာမှာ အသက် (ပါဏ)ဆိုတာ သက်ဝင်ရှင်သန်နေတဲ့ သဘောအားလုံးကို
ယူမှသာလျင် ကိုယ့်ဘ၀မှာ သူ့နေရာနှင့်သူ လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မွေးထားတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို သတ်ဖြတ်မိမယ် ဆိုရင် အဲဒီပိုင်ရှင်လူနဲ့ သတ်ဖြတ်သူဟာ ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားကာ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ် အချင်းများကြမှာမို့ မိတ်ဆွေသက်တမ်းတိုသွားပြီး မငြိမ်းအေးမှုတွေဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
ငါးဖမ်းသူများ ငါးဖမ်းသည့်အခါ ဥရှိသောငါးများကို မဖမ်းဖို့၊ (ဥရှိသောငါးများကို ဖမ်းဆီနေပါက ငါးမျိုးများ သုဉ်းသွားပါလိမ့်မည်။)
လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့်လျှော့တိုက်ကာ မဖမ်းဖို့နှင့် ငါးဖမ်းပိုက်ကွန် အကွက်စိပ်များဖြင့် မဖမ်းဖို့ (မလိုအပ်သေးသော ငါးသေး၊ ငါးမွှားများပါ သေဆုံးကုန်ပါကငါးမျိုးများသုဉ်းသွား ပါလိမ့်မည်။) စသည်တို့ကို ဆိုင်ရာဌာနများက ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု သိရပေသည်။
ဒါသည်ပင် လူသားနှင့် ငါးတို့အကြား သက်ဝင်လည်ပတ်နေသည့် ရှင်သန်မှု အသက် (ပါဏ) မပျက်စီးရလေအောင် စောင့်ထိန်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ မစောင့် ထိန်းနိုင်ပါက ငါးမျိုးများ သုဉ်းသွားပြီး တံငါလုပ်ငန်း ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှုများလည်း ရပ်စဲသွားပါလိမ့်မည်။
ထပ်ပြီးတော့ ဘ၀ထဲမှာ ပုံစံတွေ ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ ဈေးကွက်များ အပြိုင်အဆိုင်ချဲ့ထွင်တဲ့အခါမှာ ရှိသင့်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုသွားသည့်အတွက် ဈေးကွက်များ ပျက်သွားခြင်းရမှာလည်း နဂိုဈေးကွက် ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှု အသက် (ပါဏ) ပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်ပေသည်။
ယခုအခါ စူပါမတ်ကတ်ကြီးများ လိုအပ်တဲ့ပမာဏထက် ပိုမိုများပြားစွာ ဖြစ်ပေါ် လာကြတဲ့အခါ ဈေးကွက်များပြန့်ကြဲသွားသည့်အတွက် ဟိုစတိုးဆိုင်လည်း အလုပ်မဖြစ်၊ ဒီဈေးဆိုင်လည်း ရောင်းမကောင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာကြပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် အချို့ချို့ သော စတိုးဆိုင်တို့ သက်တမ်းတိုတိုနဲ့ ဆိုင် ရပ်နားလိုက်ကြရခြင်းတို့အတွက် ဈေးကွက် ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှု အသက် (ပါဏ) ပျက်စီးသွားခြင်းကို မပြုမိကြဖို့ လိုအပ်ပေသည်။
“လူ့ငြိမ်းအေးမှု” အတွက် သီလ (ကိုယ်ကျင့်တရား)တွေ လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ အခါမှာ လူ့ငြိမ်းအေးမှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အသက် (ပါဏ) လို့ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးခြင်းကို မပြုကြဖို့ လူသားတိုင်း ကိုယ်ဘ၀မှာကိုယ် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရာ ပုံစံဖြည့် လိုက်နာကျင့်သုံးတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ `
လူ၊ တိရစ္ဆာန်စတဲ့ အကောင်တွေသတ်တာကို စောင့်ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးလောက်နဲ့ နံပါတ် (၁) သီလလုံနေပြီဆိုလို့ ပြည့်စုံပါ့မလား။
ယခုအခါ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု(global warming) ဖြစ်နေရခြင်းကိုလည်း နံပါတ် (၁) သီလတွင် ပုံစံဖြည့်၍ နားလည်စောင့်ထိန်းနိုင်ကြပါလေ။
( ၂။ မိမိ မရသင့်၊ မရထိုက်သော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့အား မယူဖို့ (အာဒိန္န)ကို – – – – ဆက် လက် တင်ပြပါမည်။ )
ဘုရားဟောဆိုတာမှာ.. ထေရီ၊ထေရာ။အဠကထာ ဋီကာ ဆ၇ာတွေရဲ့.. အာဘော်တွေတော့ မထည့်စေလိုပါဘူး..နော..။
ဆရာ့..ဆရာကြီးတွေများတော့.. အပြန်အလှန်ခြေဖျက်/ကျေပျက်ကုန်ပြီး.. ဘုရားရှင်ဆိုလိုချင်တဲ့.. အဓိပ္ပါယ်ကနေ..ကင်းလွတ်ကုန်တတ်လို့ပါ..။
ကျေးဇူးပါပဲ၊ ကိုခိုင်နှင့် တကွ comment မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ၊
အလုပ်မအားတာကြောင့် ဒီနေ့မှပဲ အချိန်ရလို့ comment ၀င်ရေးဖြစ်တာပါ။ အောက်မှာ ထေရ၀ါဒအမြင်၊ ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မ၀ါဒ (မိုးပြာ) အမြင်၊ သဗ္ဗတ္ထိဝါဒအမြင်နှင့် ခေတ်အမြင်တွေနဲ့ပါ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပေးထားတာကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာရပါတယ်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓနဲ့ ယေရှုခရစ်တို့ မပေါ်ခင်ကတည်းက ရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ လူသားတွေ လိုက်နာကြသော ဂရုဓမ္မဆိုတဲ့ တရား (၅) ပါးကို လေ့လာမိသမျှ စာပေတွေနဲ့ ခေတ်အမြင်၊ ခေတ်အတွေးနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျင့်သုံးနေကြတဲ့ (၅)ပါးသီလဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းက လူသားတွေ မိမိတို့ နားလည်သလို လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြ တဲ့တရားတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချက် ငါးချက်ကို မည်သည့် ဘာသာရေးစာပေမှ မကိုးကားပဲ သီးသန့်အမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြတာပါ။ ဘာသာရေးပိုင် တစ်ခုလို မဖြစ်စေချင်လို့ ဘာသာရေးစာပေတစ်ခုခုကိုမျှ ကိုးကားခြင်း မပြုတာပါ။ အယူအဆတစ်ခုကို ဘာသာရေးအစွဲတစ်ခုခုနဲ့ မသုံးသပ်ပဲ ယခု ပစ္စုပ္ပန်တင်ပြနေတဲ့အပေါ်မှာ ဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်သင့်ကိုပဲ ဝေဖန်စေလိုတာလည်းပါပါတယ်။ စာပေကျမ်းတွေကို ကိုးကားနေတာ မှာသောင်တင်နေရင် ကျမ်းသိထက် ကျမ်းညှိခက်ဆိုသလို ဘယ်စာက ဘယ်လိုဆိုတာ ဘယ်ကျမ်းက ဘယ်လိုဆိုပြီး ငြင်းလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လို ဟောတာ၊ ခရစ်ယန်ကျမ်းတွေက ဘယ်လိုရေးတာ၊ တမန်တော်မိုဟာမက်က ဘယ်လို၊ ဘယ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်က ဘယ်လိုဖွင့်တာနဲ့ကိုပဲ ဆုံးမှာ မဟုတ်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ခေတ်လူသားတွေဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာက ပေးနေတဲ့ သေပြီးနောက် ခန္ဓာဇာတ်သိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို တညီတညွတ်တည်း လိုချင်ကြတာမဟုတ်သလို ခရစ်ယန် ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတွေရဲ့ ကောင်ကင်ဘုံလည်း လူတိုင်းလိုချင်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ အိုဘားမာ အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး တညီတညွတ်တည်း လိုချင်နေကြတာဟာ ” ငြိမ်းချမ်းရေး ” ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းကြဖို့ ဦးတည်တဲ့ အခါမှာ မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို၊ မည်သည့်လူမျိုးမဆို လိုက်နာသင့်တဲ့ ဒီ ဂရုဓမ္မလို့ ဆိုတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ မပါတဲ့ အယူအဆများဖြင့် တင်ပြပေးထားတာပါ။
ကဲ..ကျုပ်ကပဲစဆွေးနွေးပါမယ်..။ နည်းနည်း စကားအသုံးရိုင်းရင်..ခွင့်လွတ်ပါ..။
အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေးတွေဖတ်မိရင်.. မသိတာကို..မိဘတွေကို ပြန်မေးကြပါလို့..။
ပါဏာတိပါတ အင်္ဂါ ၅-ပါး။ -သတ်မှုကံမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းငါးပါး၊
အသက် (ပါဏ)ဆိုတာ သက်ဝင်ရှင်သန်နေတဲ့ သဘောထဲပါတဲ့…
၁) မိန်းမများဟာ..သဘာဝအတိုင်း.. ရာသီသွေးလာပါတယ်.။ အသက် (ပါဏ)သဘောပါတဲ့.. သားအိမ်နံရံမှာကပ်နေတဲ့… မမျိုးဥကြွေကျတာပါပဲ..။
ယောကျာ်းများဟာလည်း.. သဘာဝအတိုင်း.. သုတ်လွှတ်ပါတယ်.။ အိပ်နေရင်းဖြစ်ဖြစ်.. လိင်ဆက်ဆံရင်ဖြစ်ဖြစ်.. လက်နဲ့စိတ်ဖျော်ဖြေရင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..။ သုတ်ပိုးလို့တောင် ဗမာလိုပြောေ၇းကြတဲ့.. စပန်းတွေဟာ.. တခါလွှတ်ရင်.. အကောင်ရေသန်းသိန်း ချီပါတယ်.။ တမင်တကာ ထုတ်လွှတ်လိုက်ရင်.. လေထဲမှာကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး.။
သေကြေပျက်စီးကြသပေါ့..။ အဲ..အဲ.. ကာမဆက်ဆံဖြစ်ရင်လည်း.. မိန်းမကိုယ်ထဲ.. အကုန်ကြာကြာမနေပါဘူး..။ သန်းနဲ့ချီသေပြိး.. လူဖြစ်မဲ့တကောင်၂ကောင်ပဲ..မမျိုးဥထဲရောက်သွားပြီး.. လူဖြစ်သွားတာပါ..ဒ
ဒါတွေဟာ.. အသက် (ပါဏ)ဆိုတာ သက်ဝင်ရှင်သန်နေတဲ့ သဘောကို..လိင်ဆက်ဆံရင်ဖြစ်ဖြစ်/မဖြစ်ဖြစ်.. ဒီအတိုင်း ပျိုကြီးဖြစ်ဖြစ် .. ဖျက်စီး/ပျက်စီးစေနေကြတာပါ..။
၂) လူက..နေမကောင်းရင်.. ဘက်တီရီးယား၊ ဘိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဆိုရင်.. အင်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ် ဆေးသောက်ရပါတယ.်။
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို.. ဓာတုဆေးနဲ့သတ်တာပေါ့.။ ကောင်းတဲ့ပိုးရော.. မကောင်းတဲ့ပိုးရော.. သေတာပါပဲ..။ မသေသေအောင်ကို.. စံနစ်တကျ.. နာရီခြားပြိး.. သောက်ရတာပါ..။
ဒါပေမဲ့.. ငါဆိုတဲ့အတ္တကောင်အသက်ရှည်ပြီး.. ဟိုအကောင်တွေ..အသက်တွေ..အစုလိုက်အပြုံလိုက်..သေစေချင်တော့.. ဒီလိုပဲသည်းခံရတာပေါ့..။
ပါဏကို.. အသက်ရူသွင်းထုတ်မှ..လို့ပြောလိုရင်တော့.. ခေတ်သစ်ဇတ်လမ်းတချို့ စဉ်းစားပေးမယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ရွာသားတို့.. နားလည်လည်..မလည်လည်.. မျက်စိစုံလုံးမှိတ်..အသံထွက်..
“ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ၊”
သူကြီးကတော့ မဟုတ်တာက စလုပ်ပြီး
အကို parlayar လောက်တော့မပြောတတ်ဘူးဗျ
ကျုပ်ပြောရင် မကောင်းရှိတော့မယ် နောက်မို့ အိမ်သာပါမတက်ရဲဖြစ်ပြီး
နေမကောင်းလို့ဆေးမထိုးရင် လူကအသေခံမှာလား။ မိုးရွာရင်တော့ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် မြောက်စွားစွာအကျိုးရှိသလို
တွင်းအောင်းသတ္တ၀ါလေးတွေလည်း သေကြေပျက်စီးရတာဘဲ။ ဘယ်အရာမဆိုကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးရှိတာပါဘဲ။ အရာရာကိုတော့ အဘိဓမ္မာပေတံနဲ့လိုက်မတိုင်းသင့်ပါဘူး။ စတိဂျော့ပြောတဲ့စကားထဲ
ကလိုတစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက အဘိဓမ္မာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ချောင်ပိတ်
အားရပါးရကို လိုက်ပြီးဆိုလိုက်ပါတယ် ကို ခိုင်ရေ..
“ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ၊”..
အရက်ရောင်းရတယ် သူများမသောက် သောက်အောင် ပုလင်းလိုက်သောက်အောင်ပြောဆို ဖြားယောင်းရတယ်..(သုရာမေရယ)
မစားတာ စားခြင်အောင် ဈေးကြီးတာ ရောင်းရ အောင် ကောင်းတယ် မှန်တယ်လို့ညာရတယ် (မုသာဝါဒါ)
တာတွေ့ရင် သောက်နေတာတွေ့ရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ် (အဒိန္နာဒါနာ)
ဆိုင်မှာလာပြီးစားသောက်တဲ့ အမျိုး သမီးတွေ (အိမ်ထောင်ရှိ မရှိ မသိ)နဲ့ နေ့တိုင်းအပြန်ပြန် အလှန်လှန် နမ်းရတယ် သူတို့ရဲ့ပြူြး့ပူး ပြဲပြဲ တွေ က မမြင်ခြင်လည်းတွေ့နေရတော့ သာယာမိတာလည်းရှိ စိတ် ဖောက်ပြန်မိတာလည်းရှိဆိုတော့( ကာမေသု မိစ္ဆာ)
လုပ်စားနေတဲ့ အလုပ် အမျိုးအစားကြောင့် တစ်ကယ်လေးလေးနက်နက် ထိမ်းမိတာ လုံခြုံတာ ဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်..
purchasing တာဝန်ပါမပေးတဲ့ ဘောစ့် ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရသေးတယ် တော်ကြာ အသားပါ မှာရရင် ရှိသမျှ သီလ ကုန်ပြီ…
အေးအေးနေချင်ပါတယ်ဆိုဦးတော့ ဒီရွာသူကြီးနဲ့က မလွယ်သေးပြန်ဘူး။
ကိုယ်ကလဲ အသက်ကြီးပြီးမေ့တတ်၊ ပညာကလဲမပြည့်စုံ၊ မျက်စိမကောင်းတာရယ် ပျင်းတာရယ်ကြောင့် ဘယ်ကျမ်းမှမလှန်ဖြစ်တာကလဲ ကြာပြီ။ ဒီတော့ မနေနိုင်လို့ဝင်ပြောလဲ ခွေးအလှည်းနင်းသလို “အင်းအင်းအဲအဲ” ပဲဖြစ်နေတတ်တာ……။
အဲဒီတော့ ကျုပ်အစဖေါ်လိုက်မယ်။ တယောက်ယောက်က ၀င်ပြီး ချဲ့ထွင်ဟောကြားလိုက်ကြပါဦး။
ထေရ၀ါဒကယူတဲ့ အသက်ဆိုတာက သိပ္ပံပညာ သို့မဟုတ် အခြားသူများ သာမန် နားလည်တဲ့ အသက်နဲ့မတူပါဘူး။
သာမန်နားလည်ထားတဲ့ အသက်ဆိုတာက = မွေး+ဖြစ်+သေ
တနည်းအားဖြင့် မျိုးပွားတယ် အသစ်ဖြစ်တယ် လိုအပ်တဲ့အဟာရ/ဓါတ်သတ္ထုစသည်ကို တနည်းနည်းနဲ့ မီဝဲကြီးပြင်းတယ်။ သူတဆင့်မျိုးပွားပြီး သေဆုံးတယ်။ ဆိုတာပါ။
အဲသလိုသာယူရရင် သူကြီးနမူနာပြထားတဲ့ မမျိုးဥ/စပန်း/ရောဂါပိုးမွားတွေမှမကပါ-
ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးက အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အရိုးဆဲလ် အသားဆဲလ် သွေးဆဲလ် အရေပြားဆဲလ် အားလုံးကို (ထရီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိမှာနော်) အသက်တခုစီရှိသလိုယူရလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို ရေချိုးရင်လဲ ပါဏာတိပါတ ၊ တံတွေးထွေးရင်လဲ ပါဏာတိပါတ ၊ ဆံပင်ဖြူနှုတ်ရင်လဲ ပါဏာတိပါတ ဖြစ်ကုန်မယ်နော်……..
ထေရ၀ါဒ အဲယောင်လို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ထေရ၀ါဒအရ အသက်ဆိုတာ ရုပ်တွေ ဖြစ်+တည်+ပျက် တာကိုမယူပါ။
ရုပ်ဆိုတာကိုက မသိတတ်လို့ ရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့ အဘိဓါန်မှာပြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ထေရ၀ါဒအရ အသက်ဆိုတာ (အရမ်းကို အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်) နာမ်သဘောပါမှ = ရုပ်နဲ့နာမ်တွဲပြီး
၂၄ ပစ္စည်းပါနည်းလမ်းများနဲ့ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြု ဖြစ်ပျက်နေတာကို ခေါ်တာပါ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ထေရ၀ါဒအရ (ဒီလောက်အရှည်ကြီးရိုက်ရတာစိတ်မရှည်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒါကို ဗုဒ္ဓ၀ါဒ လို့ပဲပြောပါမည်) အသက်ရှိသူသတ္တ၀ါတခုမှာ တူရာတူရာစုလျှင် အစု ငါးမျိုးရှိပါတယ်။ ခန္ဓာငါးပါးပေါ့။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒအရ အသက်ရှိ သတ္တ၀ါ သုံးမျိုးပဲရှိပါတယ်-
ပဉ္စဝေါကာရသတ္တ၀ါ = ခန္ဓာငါးပါးလုံးရှိသော အပါယ်ဘုံ လူ့ဘုံ နတ်ဘုံ ဗြဟ္မာ့ ဘုံရှိသတ္တ၀ါများ
စတုဝေါကာရ သတ္တ၀ါ = နာမ်ခန္ဓာလေးပါးသာရှိသော အရူပဗြဟ္မာ
ဧကဝေါကာရသတ္တ၀ါ = ရုပ်ခန္ဓာ တပါးသာရှိသော ရူပ ဗြဟ္မာ
အရူပဗြဟ္မာ နဲ့ ရူပ ဗြဟ္မာ ဆိုတာက ရူပ/အရူပဈန်တွေ ၀င်စားပြီး သေတဲ့အခါ အဲဒီဈန်တွေရဲ့ ၀ိပါက်ကြောင့် အချိန်အတိုင်းအတာအတိအကျနဲ့ သတ္တ၀ါမည်ကာမတ္တအဖြစ် ခေတ္တအရှိန်ကုန်အောင်နားနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။(ကောင်းတာမဟုတ်ပါ။ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှာ ထည့်ထားတာကြည့်ပါ)
အဲဒါမှအပ – ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့အလိုအရ ခန္ဓာငါးပါးလုံးစုံမှ သတ္တ၀ါဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆံပင်ဖြူနှုတ်ရုံ အမောက်ဆလင်သောက်ရုံဖြင့် ပါဏာတိပါတကံမထိုက်ပါကြောင်း။
သို့သော် တခုပြောချင်တာက –
ကျုပ်က ကျုပ်နားလည်တဲ့အယူဝါဒကို တင်ပြရုံသာဖြစ်ပြီး
တစုံတခုကို မှန်တယ်မှားတယ်လို့ ပြောနိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ဒီထဲရေးထားတာတွေဟာ ဖတ်သူတွေထဲက မသိသူအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူကြီးကို ပြောပြတာမဟုတ်ပါ။ ကျုပ်တို့သူကြီးက အဲဒါတွေအားလုံး အရည်ကျိုသောက်ထားသလိုကို သိပြီးသားပါ။ မန်ဘာအသစ်တွေဖတ်မိရင် သူကြီးကိုပြစ်မှားမှာစိုးလို့ ကြိုပြောတာပါ။ သူက မပေါ့ဘူး……။
အောက်မှာ.. ခန္ဓာငါးပါးကို.. အင်တာနက်ထဲကနှိုက်ပြီးတင်ပေးထားတယ်..။
လို့..ဆိုထားတဲ့အထဲ.. အပါယ်ဘုံပါနေသမို့.. ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်တွေထည့်ထားဟန်ဖြစ်ပြိး.. ရှုပ်ထွေးနေသလိုတော့ ဖြစ်နေပါတယ်..။
၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာဆိုပြီး (၅)ပါးပြည့်သွားပြီ။ ဒီငါးပါးဟာ ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘ၀၊ ယခုလက်ရှိဘ၀ကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ သူတို့ကို သုတ္တန်နည်းအားဖြင့် ခန္ဓာ(၅)ပါးလို့လဲ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဘိဓမ္မာနည်းအားဖြင့် ခန္ဓာ(၅)ပါးကတော့ ရူပက္ခန္ဓာ၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၊ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာပါပဲ။ ဒါဖြင့် ဒီနှစ်ခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲလို့ ထင်စရာ ရှိတာပေါ့။ ၀ိညာဏ်ဆိုတာ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ၊ နာမ်ရုပ်-ထဲက နာမ်အရ စေတသိက် (၅၂)ပါးထဲက ဝေဒနာက ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက သညာက္ခန္ဓာ၊ ဝေဒနာ သညာက ကြွင်းတဲ့ စေတသိက်(၅၀)က သင်္ခါရက္ခန္ဓာ။ ရုပ်က ရူပက္ခန္ဓာ။ သဠာယတနထဲက ရှေ့အာယတနခြောက်ပါးက ရူပက္ခန္ဓာ၊ နောက်ဆုံး မနာယတနက ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ။ ဖဿ-က သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၊ ဝေဒနာ-က ဝေဒနာက္ခန္ဓာ။ တူရာပေါင်းလိုက်တော့ အဘိဓမ္မာနည်းအရ ခန္ဓာငါးပါးပဲ ပြန်ရတယ်။
ပဉ္စဝေါကာရသတ္တ၀ါ ဆိုတာကို ပဉ္စ+ဝေါကာရ+သတ္တ၀ါ လို့ ဦးစွာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ပဉ္စ=
၀ိဥာဏ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ။ ဝေါကာရ=ဖြစ်စဉ်။ သတ္တ၀ါ=သတ္တ-ထင်ရှားတာ
၀ါ-ရှိတာ။ ဒီလိုနားလည်ပြီဆိုရင် အရကောက်ကြည့်ကြပါစို့။ လူတစ်ယောက် သီလတစ်ခုကို ကျူးလွန်ပြီ။ ဒါဆိုရင် သူ့မှာ ၀ိဥာဏ်ကလေးတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တာလား၊ နာမ်ရုပ်ကလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်တာလား၊ ……….ဝေဒနာကလေးတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တာလား။ တကယ်တော့ ဝေါကာရဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဆိုတာ ဒီငါးမျိုးလုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာပါ။ သတ္တဝါဆိုတဲ့ ထင်ရှာတဲ့ အဖြစ်တွေပေါ့။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါ၊ သူ့မှာ ဝိဥာဏ်ကလေးချည်း သီးသီးသန့််သန့််ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူနဲ့တစ်ခြားရှင်ဖော်ရှင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ နာမ်ရုပ်တွေ၊ သဠာယတနတွေ၊ ဖဿတွေ၊ ဝေဒနာတွေပါ တပေါင်းတည်းဖြစ်ကြတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို ဝိဥာဏ်ဖယ်၊ နာမ်ရုပ်ဖယ်၊ သဠာယတနဖယ်…….ဝေဒနာဖယ်နဲ့ လုပ်နေကြတာကြောင့် တကယ့်တမ်းထင်ရှားနေတဲ့ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်ကို မမြင်နိုင်၊ မကြည့်နိုင်ဖြစ်နေကြတာကြောင့် ဒေါသကိုပယ်သတ်ချင်ကြပေမယ့် ပယ်သတ်လို့မရ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ ဒေါသဖြစ်စဉ်ဟာ လူမှာဖြစ်တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ လူမဟုတ်ဘူး။ လူမှာလာဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပဲ။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကို ပယ်သတ်ဖို့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ ဆိုးဝါးပုံ အသုံးမကျပုံတွေကို ရှုကြည့်ကြရမှာပါ။ ခက်တာက အဲဒါတွေကို ငါ၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဥစ္စာလို့မှတ်ယူတာပဲ။ သုံးဆယ်တစ်ဘုံ အကုန်လုံးကို မောင်မိုးပြာတို့က ဒုက္ခလို့ကောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပယ်လေးဘုံမှ ဒုက္ခလို့မကောက်ပဲ၊ နတ်ပြည်၊ဗြဟ္မာပြည်တွေကိုလည်း ဒုက္ခဘုံသားတွေလို့ ကောက်ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရဆိုရင် ဗြဟ္မာကြီးကို ချွတ်ခန်းမှာပါ
ဘယ်သူက နောက်သွားပါလိမ့်? ( စကားချပ် )
ဒါပေမယ့် အားလုံးကိုတော့ ဒုက္ခဘုံသားတွေလို့ ဆိုခဲ့ပုံမရပါဘူး
( အထင်ပါ )
ဘဝတွေအားလုံးကို ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တာ မှန်ပေမယ့်
ဘုံတွေအားလုံ ဒုက္ခဘုံလို့ သတ်မှတ်တာကိုတော့
( သဂျီးလေသံဖြင့် )
စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဘဝတွေ ရောဂါဘယတွေနဲ့
ဒုက္ခဘုံလို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့ ကြောင့်ကြခြင်းကင်းစွာ
ပြည့်စုံသော သပ္ပါရရှိတဲ့ဘုံကိုတော့ သုခတိဘုံလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်
ဥပမာ မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဟာ လောကီစည်းစိမ်ကိုအပြီးပြင်ခံစားပြီးမှ
ဒါဟာဒုက္ခတွေပါလားလို့ ငြီးငွေ့ပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေခဲ့တာပါ
အထူးဆိုလိုခြင်တာက ဘဝတွေဟာ ဒုက္ခဆိုပေမယ့်
( အထူးဆိုခြင်တာက ဒုက္ခလို့မြင်တာနဲ့ ဒုက္ခခံနေရတယ်လို့ မထင်တာကိုပါ )
ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ရေးတဲ့ မဟာဒါန ဆိုတဲံ စာအုပ်သေးသေးလေးကို သူကြီးနဲ့တကွ ရွာသူရွာသားများ ဖတ်စေချင်လို့ download link ပေးလိုက်ပါတယ် ..
အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ငါးပါးသီလကို ဒါနဘက်ကနေ ရှုမြင်ပြီး ရေးထားတာပါ ..
ခပ်သွက်သွက်ပဲ..ဖတ်လိုက်ပါတယ်..။ စာညွှန်းပေးတာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော..။
စာမျက်နှာ ၁၃ကနေ.. ၂၅ကြားထဲပါတယ်..။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ.. ဖတ်ကြည့်ကြပါ..။
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. လက်မခံနိုင်ပါဘူး..။ မဖြစ်နိုင်တာနဲ့..မဖြစ်သင့်တာကို.. အတင်းလုပ်ခိုင်းနေတယ်ပဲ..မှတ်ပါတယ်..။
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. လက်မခံနိုင်ပါဘူး..။ မဖြစ်နိုင်တာနဲ့..မဖြစ်သင့်တာကို.. အတင်းလုပ်ခိုင်းနေတယ်ပဲ..မှတ်ပါတယ်..။)
ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ တွေးကြည့်ပါဦး သဂျီးရေ။ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ရွာထဲဝင်ကာစတုန်းက စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ချရေးမိပါတယ်။ http://myanmargazette.net/38038/creative-writing
သဂျီးမန့်တာဖတ်ပြီး ဒီရွာနဲ့ ငါနဲ့ စိတ်ထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ပါဘူးထင်ပြီး ရွာထဲက ထွက်သွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ သဂျီးကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လူတွေရေးတာတွေ ကောင်းသားပဲဆိုပြီး ရွာထဲမှာ ဆက်နေဖြစ်သွားတယ်။
ဆက်နေရင်းနဲ့မှပဲ သဂျီးရဲ့ တွန်းပို့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားမိသွားတယ်။ (သူ့ရွာထဲနေတော့လည်း သူ့အလိုက်အထိုက်တော့ ပြောပေးရတာပေ့ါ။)
ရွာသူမမပြောထားတဲ့..ပို့စ်မှာ.. ဒီနှစ်ဆန်းက ကျုပ်ရေးထားတာပါ..။ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အဲဒါကို.. အခုလင့်ခ်က ပို့စ်နဲ့တွဲဖတ်ပြီး.. အတွေးနက်နက်ချကြစေလိုပါကြောင်း…။
(Nature) ဂျပိုးကို ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရမလဲပြောကြပါဦး 20Jul2011
စွန်က..အကောင်ရှင်မှ မစားရရင်သေမှာမို့ ..သူ့အစာသူရှာစားတာပါပဲ..။
ဒါက ..လောကသစ္စာတရားပဲ..။ အဲဒါကို …လူက ..ဒါကသဘာဝတရားပဲလို့တွေးရမှာပါ..။
အသက်ရှိတဲ့ ..သတ္တ၀ါတွေကြောင့် ..လူတွေသေကြပါတယ်..။ လောကမှာလူကို ဒုက္ခပေးတဲ့သတ္တ၀ါတွေရှိပါတယ်..။ ပိုးမွှားတွေရှိပါတယ်.။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိပါတယ်..။
ကုန်ကုန်ပြောရရင်… (နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ) ..
စပန်း(သုတ်ပိုး)တောင် သက်ရှိလို့သဘောထားရနိုင်တာမို့ .. လိင်ဆက်ဆံရင်.. အလဟဿသေဆုံးကုန်တဲ့.. စပန်းတွေအများကြီးလို့.. ယူဆလည်းဖြစ်တာပါပဲ..။
သတ်သင့်သတ်ရမှာပါပဲ..။ ၀မ်းကိုက်ပိုးတွေ.။ ဗက်တီးရီးယားတွေ..။ သန်ကောင်တွေ… သတ်နေကြတာပဲမဟုတ်လား..။
အရာရာကို .. သူများအသက်မသတ်ဘူးဆိုပြီးနေရင် ..ကိုယ်သေယုံရှိတော့မပေါ့..။
လောကကြီးထဲနေတာ… အစွန်းရောက်တွေ မတွေးကြ..မကျင့်ကြစေလိုပါဘူး..။
ရာသီဥတု မကောင်းရင်..ခြင်တွေထရင်..ကလေးတွေအသက်ခြွေတဲ့သွေးလွန်တုတ်ကွေးလာမှာမို့ … ခြင်တွေ့ရင်…ချက်ချင်းသတ်ပါ..။ မျိုးမပွားနိုင်အောင်.. လုပ်ပါ..။ ဆေးဖြန်းပါ..။
ကြွက်တွေဟာ… ပုလိပ်ရောဂါပိုးအပါအ၀င်… လူသေစေတာတွေဖြစ်နိုင်တာမို့ .. ကြွက်ဆိုရင်.. မြင်တာနဲ့သတ်ပါ..။ ထောင်ခြောက်နဲ့သတ်ပါ..။ အဆိတ်ခတ်သတ်ပါ..။
ယင်ဆိုရင်..၀မ်းရောဂါဖြစ်သေနိုင်တာမို့ … သတ်ပါ…။ မျိုးဖြုတ်ပါ..။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်… နေမကောင်းဖြစ်ရင်… အင်တိုင်ဗိုင်အိုးတစ်တွေ..စံနစ်တကျသောက်ပြီး..ကိုယ်ထဲက ပိုးမွှားတွေမျိုးဖြုတ်ပစ်ပါ..။
ထိခိုက်လျှနာရင်… သွေးထွက်ရင်… ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပါ..။ ဗက်တီးရီးယားတွေမ၀င်အောင်… အရက်ပျံနဲ့..သတ်ပစ်ပါ..။
လူထက်မြင့်မြတ်တဲ့..ရဟန်းတွေကိုတောင်..ဘုရားရှင်က.. သတ္တ၀ါအသက်သတ်ရင် ..ပါစိတ်အာပါတ်ပဲသင့်တယ်ပြောထားတာမို့ .. သတ္တ၀ါအသက်ကို ..လူကသတ်ရင်..ဘာအပြစ်မှမရှိပါ..။
ပါဏာတိပါတကံ ..ကို..ဘာသတ္တ၀ါကိုမှ.. မသတ်ရလို့..အဓိပါယ်ကောက်ယူနေရင်.. မြန်မာတွေမျိုးပြုတ်ရုံသာရှိတော့မပေါ့..။
ဒီလိုနဲ့.. အိန္ဒိယ..ဗုဒ္ဓဘာသာမူရင်းမြေကနေ.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ..မျိုးပြုတ်ခဲ့တယ်..။
မတရားတာတွေ့ရင်..မှားယွင်းဖေါက်ပြန်နေတာမြင်ရင်… ဘယ်တော့မှ…သည်းမခံနေသင့်ပါ..။ ခေါင်းမရှောင်သင့်ပါ..။ လက်မရှောင်ရပါ..။ နောင်ဘ၀က ကိုယ်ကောင်းအောင် လုပ်မနေသင့်ပါ..။
ပြန်လည်တုံ့ ပြန်တာမှာ.. အသက်သတ်ဖြတ်ခြင်းအထိကို … ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်..။
ပို့စ်ဖတ်ပြီး သပိတ်မှောက်ဖို့ စဉ်းစားထားပေမဲ့ ဦးပါလေရာနဲ့ အန်တီဝေတို့ နောက်လိုက်လို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါမယ် (မှတ်ထား၊ ကြောင်ဆိုတာ ဈေးမပေါဘူး)။ သူတို့လို အထောက်အထားနဲ့ တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးသူများ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က တဖက်သား ပြူးပြရင် ပြန်ပြဲပြတတ်တာမျိုးပဲ လုပ်တတ်လို့ပါ။ မိုးပြာလို အရည်မရ အဖတ်မရ လစ်လျှူရှု့သင့်တဲ့ ပို့စ်များလည်း ရှိပါတယ်။
ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ တတ်သိပညာ မနေသာဆိုသလို ဘဒ္ဒန္တကြောင်ကြီး မှတ်သားထားသမျှ အိပ်သွန်ဖာမှောက် ပြောရရင်..
ရူပက္ခန္ဓာ – မြင် သိ ကြား တွေး နံ ထိ အာရုံသက်သက် (ခံစားမှု သိမှုသဘော မရှိပါ)
ဝေဒနက္ခန္ဓာ – ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်း (အကောင်း အဆိုး အမှတ်သညာ မရှိပါ)
သညာက္ခန္ဓာ – ဘာပဲ၊ ညာပဲ ဟုသတ်မှတ်ခြင်း ( ယခင် တွေ့ကြုံခံစားမှုအပေါ် အခြေခံခြင်း)
သင်္ခါရက္ခန္ဓာ – ပြုပြင်စီမံပေးခြင်း ( အရွေ့လှုပ်ရှားမှု စွမ်းအင်သဘော)
၀ိညာဏက္ခန္ဓာ – သိမှုသဘော (တခုမှတခုသို့)
စာအရမ်း ဆန်နေရင် အတွေ့အကြုံတခုနဲ့ ပြောပါ့မယ်။ အရင်က ကျနော်လည်း မသိပါဘူး။ သိကျွမ်းနားလည်သူနဲ့ တွေ့မှ ခန္ဓာငါးပါးကို အပေါ်ယံ သိပါတယ်။ တနေ့ ကျနော် သဘောမကျတဲ့ လူတယောက်ကို လှမ်းအတွေ့မှာ ကွက်ကနဲစိတ် ပြောင်းတာ သတိထားမိတယ်။ မတွေ့ခင်က အခြားစိတ်တခု၊ တွေ့လိုက်စဉ် ဖြတ်ကနဲ နောက်စိတ်တခု ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်တာပါ။ ငြိမ်သက်နေရာကနေ ဆန့်ကျင်ဖက်စိတ် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားလို့ သတိထားမိဟန် တူပါတယ်။
ရူပက္ခန္ဓာ – အဲဒီလူရုပ်နဲ့ မျက်စိပသာဒ နှစ်ခုပေါင်းစုံမိတော့(ဘန်းကနဲတိုက်မိရုံသက်သက်)
ဝေဒနက္ခန္ဓာ – ဖဿဝေဒနာ (ဒေါသမဖြစ်သေး)
သညာက္ခန္ဓာ – ချက်ခြင်းဆိုသလို ဘယ်သူဘယ်ဝှာလိုသိလိုက် ( ဒီကောင်ပါလား)
သင်္ခါရက္ခန္ဓာ – မနှစ်သက်ခြင်း ခံစားမှုဖြစ် ( အရွေ့လှုပ်ရှားမှု စွမ်းအင်သဘော)
၀ိညာဏက္ခန္ဓာ – နောက်စိတ်တခု ပြောင်းသွား ( အမုန်းမှ ဟန်ဆောင်အပြုံးသို့ နောက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်း)
ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရကို ခန္ဓာငါးပါးအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးအဖြစ် သော်လည်းကောင်း ဝိပဿနာတင် ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။ စာလိုတွေး စာလိုပြောနေတာထက် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ်နေနိုင်မှ သိကောင်းတဲ့ အရာမျိုးပါ။
ပထမတော့ မပြောတော့မလို့ပါဘဲ ဒါပေမယ့်ခေတ်မှီအောင်လို့ပါ
Buddhism ပို့စ်လို့လည်း ဆိုထားလို့ပါ များများတော့မဝေဖန်တော့ပါဘူး
အစမှာပါတဲ့ ( သီလ (ကိုယ်ကျင့်တရား) ) ဒါလေးကိုဘဲ ဝေဖန်လိုက်ပါမယ်
( သီလ (ကိုယ်ကျင့်တရား) ) လို့ဆိုထားလေတော့
သီလဆိုတာကို ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ လွယ်လွယ်လေးမပြောထိုက်ပါဘူး
ကိုယ်ကျင့်တဲ့တရားဟာ သီလဖြစ်ရင် ကျုပ်က ဆဲတဲ့တရားကို ကျင့်တယ်ဗျာ
ဒါဆိုသီလဖြစ်မလား ( ဆက်ပြီးတွေးခေါ်ပါ လေ့လာပါ )
သီလနှင့်ပတ်သက်တဲ့ စာပေတွေကိုလေ့လာပါ ကျင့်ကြံကြည့်ပါ
ဒီရေသစ်ပင်ဆိုက်တဲ့ ဂေဟစနစ်နဲ့ ပါဏာတိနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း ကိုယ်ဒေါ်ရဲ့
သီလဆိုတာကို လူတိုင်း မလိုက်နာချင်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ မပြောပဲ လူတိုင်း (ကိုယ်) ကျင့်ရမယ့် တရားတွေလို့ လိုက်နာချင်အောင် ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ “ပါဏာတိ”ကို အကောင်တွေရဲ့ ရှင်သန်နေမှုလောက်နဲ့ ဘောင်ခတ်ပြီး နားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ် ဘောင်ကျဉ်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဆဲတာကို ကျင့်တာနဲ့ ဆဲတာကို ရှောင်ကျဉ်တာဟာ ဘယ်ဟာ လူတွေအတွက် ငြိမ်းအေးစေသလဲ၊ ကိုပု စမ်းချင်ရင် ဆဲကြည့်ပြီး အဖြေထုတ်ကြည့်ပေါ့။
ဆဲတဲ့ အကျင့်ဟာ လူတွေ ငြိမ်းအေးဖို့အတွက် ကျင့်သင့်၊ မကျင့်သင့် MG ရွာသားတွေကို လည်း မေးကြည့်ပါဦးနော်။
သစ်ပင်နဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ “ပါဏ”လို့ ဆိုရတဲ့ ရှင်သန်လည်ပတ်နေမှု ဂေဟစနစ်ဟာ လူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာ ၈-တန်းကျောင်းသားလောက်တောင် သိပါတယ်။
လူတွေဖြည့်ကျင့်ရမယ် သီလဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဘာသာရေးအစွဲ ပုံစံမပါပဲ တင်ပြသွားတာပဲလို့ ယူဆပါတယ်။ ခက်တာက လူတွေက စာ(ဘာသာရေး)တွေက သင်ပေးတဲ့ အတိုင်းပဲ “ကျလိ၊ ကျလိ” (စာကလေးငှက်အော်သံ)နဲ့ ဘယ်ကျမ်းနဲ့ညီမှ ဘယ်စာနဲ့ ညီမှဆိုပြီး စာသံတွေပဲကြားနေရတယ်။ ဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်သင့်ကို ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်နဲ့ မစဉ်းစားကြတော့ဘူး။ ကြားဖူးတယ့် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ကမ္ဘာ့ဦးနှောက်ပြတိုက်မှာ မြန်မာဦးနှောက် ဈေးအကြီးဆုံးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ “တစ်ခါမှ မသုံးရသေးလို့”။ လူတွေ peace ဖြစ်ဖို့ကို ဘာသာရေးအစွဲတွေ မပါပဲ ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်တွေနဲ့ စဉ်းစားကြပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဘာသာရေးအစွဲတွေပါရင် ဘယ်တော့မှ peace ဖြစ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း – – -။
Posted by ကိုငြိမ်းအေး on Oct 1, 2011 in Buddhism, Critic ဆိုတော့
ဒါ့ကြောင်းပြောတာပါ မပြောမလို့ဘဲ ပြောလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘာမှတတ်နိုင်တော့ပါဘူး
သိတယ်လေ ပြောရင်ဒီလိုဘဲ ဘန်းကြမယ်ဆိုတာ
သေချာပေါက်သိပြီးစွဲစွဲမြဲမြဲယုံကြည်ထားတာကတော့ သီလတစ်ကယ်စောင့်ရင် တစ်ကယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာပါပဲ…
ကျနော်တို့လို တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားသမားတွေအတွက်တော့ တစ်တယ့်အဆောင်ကောင်းဆိုတာ
မျက်နှာပွင့်လန်းလာပြီး လူချစ်လူခင်ပေါများလာတာကိုသိရှိခံစားရမှာ မလွဲသေချာကြောင်းအာမခံပါတယ်။
အထက်ပါအကျိုးတွေကို မျှော်မှန်းပြီးတော့လဲ သီလကိုမစောင့်သင့်ပါဘူး။
မိမိစိတ်ထဲက အမှန်တကယ် မသတ်ချင်၊မခိုးချင်၊မဖေါက်ပြားချင်၊မလိမ်ချင်၊မသောက်ချင် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သုတ်ပိုးတို့ ဘတ်တီရီးယားပိုးတို့ သေတာကိုတော့ အပြစ်ရှိမရှိဆိုတာ ကျနော်အနေနဲ့ဘွဲ့လွန်အဆင့်လို့
သက်မှတ်ပါတယ်။ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မဂ္ဂညဏ်ပညာရေးစနစ်မှာ…. အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်မှာရှိနေသေးတဲ့ကျနော်ကတော့မူလတန်းအဆင့် စည်း
မျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို စောင့်ထိန်းနိုင်ရင်ပဲ တာဝန်ကျေတယ်လို့ ကျေကျေနပ်နပ်ယုံကြည်ကြောင်းပါ။
ဘဘ မောင်မိုးပြာ ပြောတဲ့
( ပဉ္စဝေါကာရသတ္တ၀ါ ဆိုတာကို ပဉ္စ+ဝေါကာရ+သတ္တ၀ါ လို့ ဦးစွာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ပဉ္စ=
၀ိဥာဏ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ။ ဝေါကာရ=ဖြစ်စဉ်။ သတ္တ၀ါ=သတ္တ-ထင်ရှားတာ )
သဂျီးပြောသလို ဘက်တီရီးယားတွထိ လိုက်ပြီးတွေးရင်တော့ လွန်ကဲတဲ့သဘောလို့
ဥပမာ အီအီးပါပြီးလို့ ဖင်ကိုရေနဲ့ဆေးရင် အီအီးထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ
ဒုတ်နဲ့အီးကုန်းရင်တောင် ပိုးတွေ ဒုတ်နဲ့ချစ်မိပြီးသေမယ့်သဘောရှိပြန်ရော
အဲ့သည်သဘောသာနှလုံးသွင်းရရင် အီးမကုန်းတဲ့ အကျင့်ကို ကျင့်ရမလိုတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ
ဒီလောက်ထိဘဲဖတ်ဘူးတယ် ( အခြားတော့မသိ )
သာမန်မျက်စေ့ဖြင့်မြင်အပ်သော သတ္တဝါလို့ ဒီလောက်ထိဘဲအကြုံးဝင်မယ်ထင်တာပါဘဲ
ဒီအကြောင်းတွေက လိုက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု့ရှိမယ့်သဘောရှိလာမယ်ထင်တယ် ( အထင် )
နောက်တစ်ဖန်မှ အပြုခံရတဲ့ သတ္တဝါရဲ့ အိနြေ္ဒအနုအရင့်ပေါ်မှာ ပြုသူရဲ့ စေတနာပေါ်တည်းပြီး
အကျိုးအပြစ် အတိမ်အနက်ကွဲမယ့်သဘောရှိတယ်လို့တော့ သားသားကထင်တာဘဲ
ကျွန်တော်နားလည်သလောက် သီလ စောင့်ထိန်းမှုဆိုတာ
ပါဏာတိပါတာ – သူတပါးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုမှု ဒေါသ ကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှသာ .(သို့)…. ဒေါသ ကို စွန့်လွှတ်ခြင်း
အဒိန္နာဒါန – အချောင်(သို့)မတရား ရလိုမှု လောဘ ကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှသာ…..(သို့)…. လောဘ ကို စွန့်လွှတ်ခြင်း
ကာမေသု – အချောင်(သို့) မတရား ခံစားလိုမှု ကာမတဏှာ ကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှသာ…..(သို့)….ကာမတဏှာ ကို စွန့်လွှတ်ခြင်း
မုသာဝါဒ – မိမိအပေါ်အထင်သေးခံမှု၊ အထင်ကြီးခံမှု၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာဖို့သာအဓိကထားမှု၊ မတရားရလိုမှု၊ သူတပါးကို ဂုန်းတိုက်ဖျက်ဆီးလိုမှု (မာန၊ သောက၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ ဒေါသ) တို့ကို စွန့်နိုင်မှသာ (သို့) မာန၊ သောက၊ အတ္တ၊ လောဘ၊ ဒေါသ ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း
သူရာမေယ – ထိုင်းမှိုင်း မိန်းမော ယစ်မူး ရီဝေသာ ခံစားချက် ကို တရှိုက်မက်မက် ခံစားနေလိုမှု လောဘ-တဏှာ ကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှသာ…. (သို့) လောဘ-တဏှာ ကို စွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ဘာကို အဓိကထား၇မလဲ ။ http://www.mediafire.com/?bwj7c0vv5yve8qf )
ဘာဝနာမယပညာဥာဏ် (မိမိလောဘ-ဒေါသ-သောက-စိတ်အညစ်အကြေးများ defilements ကိုစွန့်လွှတ်တတ်သည့်ပညာ) မပါဝင်ဘဲ သီလချည်းသက်သက် တစ်ခုတည်း ကို plain ကြီးသက်သက် စောင့်ထိန်းနေခြင်း၊ ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားဝေဖန်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့ ။
သူဂျီးအယူအဆက ရေသောက်ရင်ပိုးကောင်တွေသေကြေပျက်စီးမှာဆိုးလို့ စစ်သောက်တဲ့ ဂျိမ်းဘုန်းကြီးနဲ့တူသလိုဘဲ..
နားလည်အောင် ဘာသာပြန်ကြရင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြောင်းသွားတတ်လို့ သတိထားကြပါ။ဥပမာ “၃။ သူတစ်ပါးရဲ့ ကာမအာရုံ (ကာမေသု)အား အလိုမတူ မပြုရခြင်း။
(ပုံစံအားဖြင့် သူတစ်ပါး သား၊ မယားအား အလိုမတူ ကာမ မလွန်ကျူးရခြင်း)”..ဆိုတာမျိုးပေါ့။အလိုတူရင် ကံမထိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သွားမှာပါ။အနက်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဆိုလိုရင်းကိုသိရသလို ရည်ရွယ်ရင်း ကိုလည်းသိမှ..ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းကြောင့် ရရှိလာမည့် ကောင်းကျိုး သည် မိမိအတွက် အသုံးတည့်မတည့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် သင့်ပါကြောင်း……။
အလိုတူမှတော့ ဘယ်လို လုပ်ကံထိုက်တော့မှာလဲ Harumoto ရယ်။ မိဘရော၊ ကာယကံရှင်ပါ အလိုတူတယ်။ အဲဒါ ကံထိုက်ပါ့မလား။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ကလေးမရနိုင်ဘူး။ ကလေးလိုချင်တော့ ဇနီးသည်ကို ခင်ပွန်းသည်ခွင့်ပြုမှုနဲ့ အလိုတူ ခလေးရစေတဲ့နည်းလမ်း ရှာပြီးဆောင်ရွက်တယ်။ အဲဒါ ကံထိုက်တယ်လို့ ဆိုရင် သိပ်အတွေကျဉ်းမြောင်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အခု တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ သုတ်ပိုးလှူဒါန်းတာတောင် ရှိနေပြီ။ ခင်ပွန်းသည်ကအလိုတူလို့ ဇနီးက သွားအလှူခံတာ ဘယ်လို ကံမြောက်မလဲ။ ရှေးရိုးစွဲအတိုင်းကြီးပဲ မတွေးနဲ့လေ။ ခေတ်ကို မျက်စိဖွင့်ထားပါဦးလို့ ၀င် ဂွကျလိုက်ပါရစေ။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က ဥတ္တရာဆိုတဲ့ (သောတာပန်အဆင့်လို့ စာတွေကဖော်ပြထားတဲ့) သူဌေးသမီးက တစ်နေ့ကျတော့ ဘုရားရှင်နဲ့ သံဃာတွေကို ကိုယ်တိုင် အချိန်ပေးပြီး ဆွမ်းချက်ကပ်ချင်လို့ သူယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူ ခွင့်ပြုလက်ခံအောင် အဲဒီကာလအတွင်းမှာ သူ့ယောက်ျားအတွက် သီရိမာဆိုတာ ပြည့်တန်စာအမျိုးသမီးကို အလိုတူစီစဉ်ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီသောတာပန်အဆင့်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ စီစဉ်မှုကို ဘယ်လို နားလည်ကြမလဲ Harumoto ရေ။ သောတာပန်အသိဥာဏ်ကတော့ သူ့ယောက်ျားနဲ့ သီရိမာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံမြောက်အာင်လုပ်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာ။ ပုံသေကြီး ရိုးရာအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ အသေမှတ်မထားနဲ့လေ။ ဥာဏ်အရှင်ထားမှပေါ့ Harumoto ရ။
ရှူသွင်း/ထုပ် တဲ့ လေ မှာ ပါ ပိုးတွေ ပါနေတယ် သဂျီးရေ။
သွင်းလိုက်တဲ့ လေထဲမှာလဲ ပိုးတွေ ပါပြီး အထဲ ရောက် ရင် သေကြရ ရှာ တယ်။
( မသေနိုင်တဲ့ ကူစက်ရောဂါ ပိုး ကျတော့ လူခန္ဓာ ထဲ ဆက်ရှင်သန်ပြီး ရော ဂါ ဖြစ်စေပြန်တာ ပေါ့။ )
ထုပ်လိုက်တဲ့ လေမှာ လဲ ပိုး ပါ ပြီး ပြင်ပ လေထု နဲ့ တွေ့ ရင် သေကြရ ရှာ တယ်။
အဲဒီတော့ သူတပါး အသက် ကို မသေ စေရအောင် သဂျီး အ သက် မရှူ ဘဲ နေ လိုက်တော့။
သူကြီးမင်းရေ သွားလည်းမတိုက်နဲ့နော်။ ခံတွင်းထဲကပိုးတွေသေမယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေတဲ့ lotion တွေလည်းမလိမ်းနဲ့နော် ။း)
တွန်းပို့ခြင်း>>>ငြင်းခုန်ခြင်းရဲ့ အနုပညာ>>ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်…>> အကောင်းဆုံးအဖြေ
That quote pretty much sums up Osborn’s ideas on brainstorming and creative thinking. Brainstorming is method of thinking up solutions, ideas or new concepts. It can beadifficult process for many reasons: sometimes people are unwilling to suggestasolution for fear of criticism or the problem may just beavery difficult one, and one that no existing solutions exist for yet. Osborn’s solution, as suggested by the above quote, is to think up as many ideas as possible regardless of how ridiculous they may seem at first. Since it is very unlikely to think up the perfect solution right off the bat, he recommends getting every idea out of your head and then go back to examine them afterwards. An idea that may have initially sounded off-the-wall may actually turn out to beaplausible idea withalittle modification. Osborn’s technique of deferred judgment increases the individual’s synthesis capabilities by releasing the human mind from the analysis mode of thinking. Brainstorming is considered to beagroup method of listing suggested ideas pertaining toasolution foraspecific problem.
ဆိုတော့.. ပါဏာတိပါတာနဲ့ဆိုင်တဲ့.. ဒီပိုစ့်တင်သူက.. အပြီးသတ်ကောက်ချက်တခုတော့ ဆွဲပေးရမှာပဲ..။
တောင်းပန်ပါတယ် ကိုခိုင် – – – -။ ဘယ်ချောင်မှာမှ သွားမနေပါဘူး။ အချိန်မရ၊ အလုပ် မအားလို့ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာ comment ပြန်ရိုက်ပေးပြီးပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ “ပါဏ”ဆိုတာကို ရှင်သန်သက်ဝင်ခြင်လို့ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။ ရှင်သန်သက်ဝင်တယ်ဆိုတာ လူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သစ်ပင်တွေရဲ့ သက်ဝင် ရှင်သန်မှုတင်မက သဘာဝတရားတွေရဲ့ သက်ဝင်ရှင် သန်နေမှုကိုပါ အကျုံးဝင်အောင် ရေးထားတာပါ။ လူသားတွေ ငြိမ်းအေးမှု ကိုဖြစ်စေသော ကောင်းမွန်တဲ့ သက်ဝင်ရှင်သန်နေမှုများကို မဖျက်ဆီးကြဖို့၊ စောင့်ထိန်းကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေ ဆွေးနွေးတဲ့ အထဲ ကို လူငယ်လေးကျွန်တော် သိပ်နားမလည်လို့ မေးပါရစေခင်ဗျား ..
ပါဏာတိပါတ ကို ကျွန်တော်နားလည်မိတာ .. သူများအသက် မသက် ရဘူး လို့ဆို တယ်နော် ..
သက်ရှိဆို တာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ သိချင် ပါတယ် ..
သက်ရှိ ထဲမှာ သစ်ပင်တွေ ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်
ပီးတော့ ပါဏာတိပါတ ကံကျုးလွန်တယ် ဆိုတာ ..သူများ အသက် မသတ်ရ ဆိုတော့ ..
အသက်ဆိုတာ cell တိုင်း မှာ ရှိပါတယ် .. ဒီတော့ ပါဏာတိပါတ ကံ ကို မကျူးလွန်ချင် ရင် သတ္တ၀ါ တွေကို မသတ်ရုံမျှမက သစ်သီးလည်း မစားရပါဘူး. အရွက်လည်းမစားရပါဘူး ဘာမှစားမရပါဘူး ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့က သက်ရှိတွေကို မစားရင် အသက်ရှင်လို့မရပါဘူး ..
ကျန်းမာရေးအရဆိုရင် တော့ အရွက် များများစား တာဟာ အသားများများစားတဲ့သူ တွေထက် ပိုပီး အသက်ရှည်နိုင်တယ်တဲ့ .. ပါဏာတိပါတ ကံက ကျန်းမာရေးအတွက် လား ဒါမှမဟုတ် တရား သဘော အရဘဲ လား .. ?
အသက်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ပြောကြမယ်ဆိုရင်
လောကီ နှင့် လောကုတ္တရာ ဆိုပြီး အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လောကီရဲ့သဘောက အာရုံခံစားဘို့ ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ပါ
လောကုတ္တရာကတော့ ဒီအာရုံတွေဟာ မတည်မြဲ ဒုက္ခလို့မြင်ရမှာမို့ပါ
သတ္တဝါတွေ အောက်စီဂျင်နဲ့ အဟာရကိုမှီဝဲသလို
ဖယောင်းတိုင်နဲ့ မီးခွက်ဟာလဲ အောင်စီဂျင်နဲ့ လောင်စာကို မှီဝဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်
ဇီဝသက်ရှိရဲ့ အာရုံခံစားမှု့နဲ့ သစ်ပင်ရဲ့ အာရုံခံစားမှု့ဟာ မတူဘူးဆိုတာ
ဓာတ်ခွဲခန်းထဲရောက်မှ သိရမှာပါ ( ကိုယ်တော့ရောက်ဖူးဘူး )
( ပါးစပ်မရှိတာရယ် မရွေ့လျှားနိုင်တာရယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး )
တီကောင်တစ်ကောင်ကို ဆားနဲ့တို့ရင် ထပြီးအော်ပါတယ်
( ကြောင်တွေ နွားတွေ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဆိုတာကို နားမလည်ပါဘူး
ပြောလို့သာပြောတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း လဲခပ်ဝါးဝါးပါဘဲ
ဒါဆို ဦး kai ပြောသလို brain မရှိတဲ့ .. အကောင်တို့ .. မတုန်တတ်တဲ့ .. မလှုပ်တတ်တဲ့ အကောင်တို့ .. အမြစ်ပါပီး အသား လည်းပါတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပိုင်း အကောင်တစ်ပိုင်းတို့ ပေါ်လာရင် .. သူတို့ ကို ခုတ်ထစ်လိုက်ရင် .. စားလိုက်ရင် .. ပါဏာတိပါတ ကံ ကျူးလွန်ရာ ရောက်လား မရောက်ဘူးလားမသိ .ဘူး ??
ကျွန်တော့် ရဲ့ အတွေး လေး တစ်ခု ပါ
ဘုရား ရှင်တောင် မှ .. ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူ (experienc”ED” people) ကိုဘဲ ချွတ်ခဲ့တာ ..
ကျွန်တော် က မကျွတ်ထိုက်သေးဘူးဆိုရင် တရား ဘယ်လိုပြပြ ရမှာ မဟုတ်ပါ
အင်္ဂုလိမာလ ကတော့ သူလုပ်ချင်တာလုပ် တာဘဲ။ တရားရသွား ပါတယ် .. သူက ကျွတ်ထိုက်တဲ့ အသိဥာဏ်ရှိနေပီကိုး ..
ဒါကြောင့် .. လုပ်ချင် လာပီဆိုရင် အဆုံးအစွန်း ထိရောက်အောင်လုပ် ..
တနေ့ တရား ကတော့ ရမှာဘဲ .. ဘာဘဲလုပ်လုပ် experience ဆိုတဲ့ အမြတ်ရတယ် ..
experience တွေများ လာရင် တနေ့ .. အသိဥာဏ် ပညာ အလင်း ပွင့်လာလိမ့်မယ် ..
ဥာဏ်ပညာအလင်းဆိုတာ သူများက ထိုးပေးတိုင်းလည်း ရတာမဟုတ်ပါဘူး ..
ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစား ဖူးမှ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် .. နိဗ္ဗာန် ရောက်ချင် တယ် .. ဆိုရင် …
ဘုရားရှင်က လေးအသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီ (Experience) ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တယ် .. ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန် ရောက်တယ် .. ကျွန်တော် လည်းနိဗ္ဗာန် ရောက်ချင် တယ် .. အလွယ်လေးဘဲလေ .. လေးအသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဖြည့်ကျင့်ပေါ့ .. experience တွေရှာပေါ့ ..
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးတယ် .. ” ပညာရှိဆိုတာ တဲ့ . မီးကို ပူတယ်လို့ပြောရင် မထိကြည့်တော့ဘူးတဲ့ လူမိုက်တွေကမှ မီး ကို ပူတယ်ဆိုတာ မယုံလို့ စမ်းကြည့် ကြတယ်တဲ့ ” ကျွန်တော့် အထင်တော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသလားဘဲ .. ပညာရှိဆိုတာ စူးစမ်းရဲရတယ် .. လူမိုက်ဆိုတာ သူများပြောတာ ကို ယုံကြတယ် .. လို့ .. ဒါကြောင့် ဂေါတမ ဘုရားရှင် (မဟာဆရာကြီး) ဟောခဲ့တာကိုဘဲ ပြန်ပြောချင်ပါတယ် .. “ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲပြောပြော ဦးစွာမယုံ နဲ့” .. လို့လေ ..
ခုမှ လုံးလုံးကို ဓမ္မကထိကဖြစ်ရော
( ပညာရှိဆိုတာ စူးစမ်းရဲရတယ် .. လူမိုက်ဆိုတာ သူများပြောတာ ကို ယုံကြတယ် )
ဆိုခြင်တာကတော့ စူးစမ်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပါ အထူးသဖြင့်( ရဲ ) ကိုပါ
စူးစမ်းရဲတာနဲ့ စွတ်လုပ်တဲ့သဘောကို မြင်သာစေခြင်ပါတယ်
တွေးသိရင် ပြေးကြည့်တာထက်မှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကို ပေါက်သင့်ပါတယ်
ဥပမာပေါ့နော မစင်ကို ရွှံ၇ှာဖွယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာကို
စွတ်ပြီးတော့ စူးစမ်းရဲတဲ့သဘောနဲ့ စားကြည့်သလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပါတယ်
ဆိုခြင်တာက သူများပြောတာမယုံဘူး စားကြည့်ပြီးမှယုံမယ်ဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ပါ
ရံခါ သဘာဝ ( ကံ ) ကြောင့်
အကြောင်းတစ်ခုအပေါ်မှာ မစူးစမ်းဘဲ ဉာဏ်နဲ့သိတတ်တဲ့သဘောကိုဆိုလိုပါတယ်
ကျန်တာတွေကိုတော့ အောက်ကလင့်တွေမှာ သွားပြီးမေးလျှောက်နိုင်ပါတယ်
ဒီလို ဓမ္မရဲ့သဘောတွေကို စိတ်ဝင်စားတာကောင်းပါတယ်
ရဟန်းတွေရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေ ဒါမှမဟုတ်
ဓမ္မ ဆိုဒ်တွေမှာ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်
လောကုတ္တရာထည်းနေတဲ့သူ က မိမိကို ပိုပြီးအကျိုးရှိအောင်
ဦးလေး ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ..
ဦးလေး ရေးတဲ့စာသားတွေကို တအားသဘောကျတယ် ..
ဦးလေးရဲ့ comment တွေလည်း များကြီး ဖတ်ဖြစ်တယ် .. ခက်တာက ဖတ်၊ မှတ် ပီး နားလည်ရုံဘဲ ရှိတာ .. reply ဖို့ ပညာမရှိသေးလို့ မလုပ်ဖြစ် ပါဘူး ..
ဦးပြောတာ အခုတော့ နားလည်သလိုရှိလာတယ် .. ပညာရှိဆိုတာ စူးစမ်းသင့်တဲ့နေရာမှာ စူးစမ်း ပီး နားလည်သင့်တဲ့နေရာမှာ နားလည် ရမှာ ..နော .. ဟီး ..
ပီးတော့ တရားဆိုတာ .. မရှာချင်သေးပါဘူး .. တော်ကြာမိန်းမမရဘဲ ဘုန်းကြီးဝတ်သွားမိနေအုံးမယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာတော့ ရချင်တယ်ဗျ .. စိတ်ငြိမ်ရင် ကြံစည်သမျှအရာ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တယ် ဗျ … ဇာတ်ကားတွေထဲက လို cold blooded မင်းသားတွေလိုလေ ..
အမှန်တော့ ကျွန်တော်က .. ဒီ site ထဲမှာ တမင်ညစ်ချင်လို့ . ၀င်ရေးတာပါ .. ဟီး ..
ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေဆိုတော့ ဘယ်လိုညစ်ရမလဲ မသိ .. ဟီး .. မှားသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် .ခင်ဗျား .. !
ဦးလေး ပေးတဲ့ site တွေက မေးဖို့ .. Question box လည်းမပါဘူး .ဗျ..
သီလပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီပို့စ်ရေးသူ ကိုငြိမ်းအေးရှုထောင့်က တစ်မျုိးဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။ comment တွေကတော့ ရှုထောင့် အမျုိးးကဝေဖန်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ပါဏာတိပါတာ (အသက်)နဲ့ပတ်သက်လို့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဂျိန်းဘာသာနဲ့ ယနေ့ခေတ် မြန်မာထေရ၀ါဒအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတော်တော်များများက လူအပါအ၀င်၊ အကောင်မျုိးစုံကို သက်ရှိ (သတ္တ၀ါ) လို့ နားလည်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အာသောကမတိုင်ခင် မူလထေရ၀ါဒဂိုဏ်းကွဲထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သဗ္ဗတ္ထိဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းက ယူဆတဲ့ သတ္တ၀ါက အကောင်တွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာ သက်ဝင်ရှင်သန်မှုတွေဖြစ်နေတာမှန်သမျှကို သတ္တ၀ါ (အသက်)လို့ ဖွင့်ဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေရာမှာ အသက်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအခြေအနေကို အသက် (သက်ရှိ)လို့ ပြောကြမလဲ ?။ ဟိန္ဒူ၊ ဂျိန်းနဲ့ ထေရ၀ါဒအယူလား ?။ သဗ္ဗတ္ထိဝါဒ အယူလား?။ ဒါမှမဟုတ် ကို ငြိမ်းအေးက ဘယ်လို့ ထောင့်ကနေ ရေးတာလဲ – – – – – ?။ ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေများကရော – – – – -?/
please read again the comment of parlayar46.
my pc cant type myanmar font.
thank thantmonzaw parlayar46 ကို သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ခန္ဓာငါးပါးလုံးစုံမှ သတ္တ၀ါဖြစ်ပါကြောင်းဆိုတာ ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းက ဂျိန်းတွေ၊ ဗြဟ္မဏတွေယူထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ ပရမတ္တသစ္စာဒဿနပါ။ အခုအပေါ်က comment က ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သဗ္ဗတ္ထိဝါဒရဲ့အယူအဆကို နှိုင်ယှဉ်လေ့လာလို့ ရအောင် တင်ပြလိုက်တာပါ။ နာမ်သဘောပါမှ အသက်လို့ဆိုတာ ပရမတ်သမားတွေရဲ့ အယူပါ။ သစ်ပင်တွေမှာတောင် တုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ အသိတွေရှိနေတာကို ယခုခေတ်ပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်လို့ တွေ့နေရပြီလို့ သိနေရပါပြီ။ ဒါဆိုရင် ပရမတ်သမားတွေအလိုအရ သစ်ပင်တွေကို ခန္ဓာငါးပါးလို့ပဲ ပြောကြမလား။ လောကရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ခန္ဓာ(အစုအဖွဲ့) ငါးမျိုး ပေါင်းစပ်နေတာကို ဗုဒ္ဓက သူ့ခေတ်သူ့အခါက အသုံးဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာငါးပါးလို့ သုံးထားတယ်လို့ နားလည်ကြည့်ရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။ ဒီဘက်သိပ္ပံခေတ် မှာတော့ atomတွေ၊ electronတွေ၊ protonတွေလို့ နားလည်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ ပုံသေမှတ်ထားလို့တော့ မသင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီခေတ်ပညာရှင်တွေက လူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ chromosomeနဲ့ တစ်ချို့သစ်ပင်တွေရဲ့ chromosome တွေ သွားတူနေတာကိုလည်းတွေနေရပြီလို့ ပြောနေကြပါပြီ။ ဗုဒ္ဓက လူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေက ခန္ဓာငါးပါး၊ သစ်ပင်တွေက ခန္ဓာဘယ်နှစ်ပါးပဲလို့ မဟောခဲ့ဘူး။ နောက်လူတွေက ပရမတ်အမြင်နဲ့ (တက္က)ကြံစည်စိတ်ကူပြီး
ဖွင့်ဆိုကြတာပါလို့ ဝေဖန်တဲ့ သုတေသီ ပညာရှင်တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့ရအောင် ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတွေကို သစ်ပင်ကို ပျက်ဆီးစေလိုတဲ့ စေတနာနှင့် ခုတ်ရင် ပါစိတ်အာပတ်၊ တိရစ္ဆာန် (ပိုးမွှားမှအစ ဆင်ကောင်ကြီး အထိ )သေစေလိုတဲ့ စေတနာနှင့် သတ်မိရင်လည်း ပါစိတ်အာပတ်ပဲလို့ အတူတူတစ်တန်းတည်းထား ပညတ်ခဲ့တာကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။
ဒါပေမယ့် လူကျတော့ သေစေလိုတဲ့ စေတနာနှင့် သတ်မိမယ်ဆိုရင် ပါရာဇိကတဲ့။ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ သတ္တ၀ါသတ်မှတ်ချက်က ပရမတ်သမားတွေဖွင့်ဆိုနေတာနဲ့ ကိုက်ပါ့မလား။
You install zaw-gyi font from
You install zaw-gyi font from http://zawgyi-font-installer.fyxm.net/.
zawgyi fount အတွက်ကျေးဇူးပါrealmanရေ
(သစ်ပင်တွေမှာတောင် တုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ အသိတွေရှိနေတာကို ယခုခေတ်ပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်လို့ တွေ့နေရပြီလို့ သိနေရပါပြီ။)ဆိုတော.အိုင်းစတိုင်းရဲ.သိပ္ပံပညာအပေါ်
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်တောရ) ပြောတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတရား (အများအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်၊ မိမိလောဘ-ဒေါသကြောင့် သူတပါး(အများ)ထိခိုက်နစ်နာမှာကို ငှဲ့ကွက်တဲ့စိတ်) လေးတစ်ခုတည်း ကိုသာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မိမိစိတ်နှလုံးမှာ ကိန်းအောင်းလာအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါတဲ့။
သီလတရားရော၊ ဒါနတရားရော၊ ဗြဟ္မာစိုရ်တရားတွေရော အလိုလို ပြည့်စုံလာပါမယ်တဲ့ ။
အလိုချင်ဆုံး က .. မင်းလေးဘဲ ..
ဟီး.. ပိုက်ဆံ ကိုပြောတာပါ ..
ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရင် .. အဲ့ အလိုချင်ဆုံးကို ရနိုင်တယ်ဆို တာ ယုံပါ့မလား ..
မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါ .. ယုံလို့စမ်း .. စမ်းပီး .. တွေ့တဲ့သူတွေ ကပြောနေကြပီ .. billionaire တွေရေးတဲ့စာအုပ် .. ဖတ်ကြည့် .. စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရေးတာပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် .. billionaire နဲ့ သမ္မတ ဆိုရင် billionaire က ပိုပီး အဆင့်မြင့်တယ် .. ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
.. အဲ .. ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သတ်ပီး ..
opportunities တွေ ..သင့် .. အနားမှာ အပုံးကြီးပါ .. ကျွန်တော်ကတော့ စမ်းနေပီ ..
ကျွန်တော် လိုချင်တာ က .. billionaire .. ဒါကြောင့် .. ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေထား တယ် .. သူတပါးကိုကူညီတယ် .. ပီးတော့ .. ပြောပြတယ် .. ကျွန်တော် billionaire ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ..
ဒါပေမယ့် .. မမေးခင်ဖြေထားမှ .. ခုထိတော့ လက်ထဲ zero နေတုန်း .. အမေ ရှိလို့ minus မထွက်သေးတာ .. ဟီး .. !
တစုံတခုကိုလုပ်လို့(ကံတခုပြုလို့) ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်မျှကောင်းကျိုးရတယ်၊ ဘယ်မျှအပြစ်ကြီးတယ် ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က သတ်မှတ်ပညတ် တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက မြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒ အယူအဆအရ သူ့သဘာဝအတိုင်း အမြဲမှန်နေတဲ့ ကမ္မနိယာမသဘောပါ။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က သတ်မှတ်ပညတ် တာက ရဟန်းအဖွဲ့ဝင်တွေ လိုက်နာရမယ့် သံဃ၀ိနယ သို့မဟုတ် ရဟန်းစည်းကမ်းပါ။ အဖွဲ့အစည်းအကျိုးရှိဘို့ အဖွဲ့အစည်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘို့ ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ရတဲ့ အဖွဲအစည်းတွင်းစည်းကမ်းပါဗျာ။
ဘုရားရှင်က ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်လို့ ဆိုင်ရာအကျိုးပေးတာတွေကို ဘာမှဝင်မရှုပ်ပါဘူး။ ဘုရားဝင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ ၀င်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရဟန်းသည် သစ်ပင်ခုတ်ရင် မြေကိုတူးရင် အကုသိုလ်မဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီကံအတွက်တော့ အကုသလ၀ိပါက်မဖြစ်ပါ။ ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
တိရိစ္ဆာန်ကိုသတ်ရင်တော့ အကုသိုလ်ဖြစ်တာကြောင့် / ပါဏာတိပါတကံထိုက်တာကြောင့် အပါယ်ကျမှာပါ။
ရဟန်းဝိနည်းအရ ရဟန်းသည် သစ်ပင်ခုတ်ရင် မြေကိုတူးရင် ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်လို့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ပါစိတ်အာပတ် (အဖွဲ့စည်းကမ်းအရ) သတ်သတ်ထပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်ကို ၀န်ခံကုစားရင် အဖွဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညီသွားလို့ အဖွဲ့အပေါ်အပြစ်ကျေပါတယ်။ ကမ္မနိယာမအရလဲ အကုသိုလ်ကံ ကျူးလွန်တာမဟုတ်လို့ ဘာမှမဖြစ်တော့ပါ။
ရဟန်းဝိနည်းအရ တိရိစ္ဆာန်ကိုသတ်ရင် ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်လို့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ပါစိတ်အာပတ် (အဖွဲ့စည်းကမ်းအရ) သတ်သတ်ထပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်ကို ၀န်ခံကုစားရင် အဖွဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညီသွားလို့ အဖွဲ့အပေါ်အပြစ်ကျေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိရိစ္ဆာန်ကိုသတ်တာကတော့ အကုသိုလ်ဖြစ်တာကြောင့် / ပါဏာတိပါတကံ ထိုက်တာကြောင့် အပါယ်ကျမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံထေရ၀ါဒ အယူအရ သစ်ပင်ခုတ်တာနဲ့ တိရိစ္ဆာန်သတ်တာ အပြစ်ချင်းမတူပါဘူးဗျာ။
၀ိနယရဲ့သဘောကို တနေ့ အကျယ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဘုန်းကြီးများကို အလွန်အားနာလို့ပါ။
ပြန်ဖတ်တော့.. ဒီနေရာလေးမှာ.. သတိထားမိစရာလေးတွေ့လို့ပါ..
ရဟန်းက.. ၀ိနည်းကိုချိုးဖေါက်ရင်.. ဆိုင်ရာအပြစ်တခုရမယ်..
ပြီးရင်…လူသားအဖြစ်နဲ့.. ဆိုင်ရာ ကုသိုလ်..အကုသိုလ် အကျိုးအပြစ်တခုရမယ်..
ဒီအပေါ်မှာ.. မိုးပြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက.. ဘယ်လိုမြင်သလည်း.. သိချင်မိပါတယ်..။
မြန်မာထေရ၀ါဒီတွေက သောတာပန်တို့၊ သကဒါဂမ်တို့ – – – ဆိုရင် ငါးပါးသီလလုံပြီလို့ အသေယူထားကြပုံရတယ်။
သောတာပန်ကတည်းက ငါးပါးသီလကို အပြည့် လုံနေတယ်ယူထားတော့ အထက်အရိယာအဆင့်တွေအတွက်က ဆက်လုံစရာ သီလက မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုရမလိုပဲ။
ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ကောသလမင်းရဲ့သား (၀ိသဋူပမင်းသား)က အငြိုးနဲ့ လာသတ်တာ ဆွေမျိုးတွေ (အရိယာတွေ အများစု ပါသည်)က လည်းစင်းပြီး ခံပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ပြန်ခုခံတယ်လို့ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့် လာသတ်တဲ့သူကိုယ်တော့ ပန်းလေးနဲ့ပေါက်ပြီး ခုခံမှာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။ တုတ် တုတ်ချင်း၊ ဓား ဓားချင်း တုန့်ပြန်ကြရင် ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြမလဲ၊ ဓားဆိုတာ သေတတ်တယ်နော်။
အရိယာဆိုတာ အရုပ်ကြီးလို မတုန်မလှုပ်နေတာကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။
ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗန်စံပြီးတော့ ဓာတ်တော်တွေခွဲဝေပေးတဲ့ ဒေါနပုဏ္ဍား(သောတာပန်လို့ စာတွေက ဖော်ပြထား)က ဝေစုတွေထဲက တစ်ခုခိုးထားတယ်တဲ့။ အဲဒါကို သောတာပန်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သိကြားမင်းက သူခိုးလက်က သူဝှက်လုသလို လုထားလိုက်ပြီး ကိုးကွယ်ဖို့ ယူထားလိုက်တယ်လို့ ဆိုထားကြတော့ ဒါ ဘယ်လို သောတာပန်တွေလဲ။
သောတာပန်ဆိုတာ ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာကိုပဲ ပယ်တာဆိုတော့ ဒီ ဒိဋ္ဌိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ငါးပါးသီလပဲလုံနိုင်မှာပေါ့။
ကျန်တဲ့ ကိလေသာတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ငါးပါးသီလက လုံနိုင်ပါ့မလား။
ငါးပါးသီလကို ပယ်နိုင်မှု ကိလေသာ အဆင့်အတန်းတွေနဲ့ ပုံစံဖြည့် နားလည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
လူအတု.. အသက်အတု.. လုပ်နိုင်ဖို့.. တဆင့်နီးလာပြန်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း..
By Robert Langreth on April 19, 2012
Scientists movedastep closer to synthesizing new life forms in the laboratory after researchers showed that artificial genetic material called XNA can be replicated in the test tube much like real DNA.
Researchers at the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology in the U.K. demonstrated for the first timeaway to extract information from the artificial genetic molecules and mass produce copies of them. The finding, published today in the journal Science, shows that DNA and its sister molecule RNA may not be the only chemical structures upon whichaliving unit can be based.
“Life is based on this amazing ability of DNA and RNA to store and propagate information,” said Philipp Holliger,aMedical Research Council molecular biologist and senior author on the study. “We have shown that the basic functions of DNA and RNA can be recapitulated” with new artificial molecules.
လူအတု.. အသက်အတု.. တွေကို လုပ်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ ဘုရားအတု၊ တရားအတု၊ သံဃမဟာနာယကအတု အဲလေ . . . . ဘုန်းကြီးအတုတွေ ပျောက်သွားမှာ အသေအချာ။
ဘယ်တော့ ပေါ်မှာလဲဟင်၊ မြန်မြန် လုပ်နိုင်စေချင်ပြီဗျာ။
ဒါမှ အစစ်တွေက နေရာမှန်ရမှာ။
“ဥ”တက”ဥ”ထဲ..လူဥဈေးအကြီးဆုံးလို့.. Wired မဂ္ဂဇင်းကဆိုလိုက်ကြောင်း..။
Here are the prices forawide universe of other compounds which are also priced ona“per ounce” basis…
Beluga caviar: $345
Carbon 60: $2,495
Namibian uncut rough diamonds: $98,490
Plutonium Oxide: $165,500
Soliris (anemia drug): $533,000
Human eggs: $157 trillion
https://myanmargazette.net/160592/health-fitness/food-drink ဖတ်ပြီး.. ဒီပို့စ်ကို ရှေ့ပြန်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း.. :harr:
လူ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် မိုက္ကရိုစကုပ်နှင့် ကြည့်မှ မြင်ရသော အကောင်ငယ်လေး များရှိ
ပင့်ကူများနှင့်ဆက်နွယ် သဏ္ဍာန်တူပြီး ခြေထောက်ရှစ်ချောင်းပါရှိကာ ရေခဲမုန့်ကတော့နှင့် အလွန်တူသော မိုက်က္ကရိုစကုပ်ဖြင့် ကြည့်မှ မြင်ရသည့် အကောင်ငယ်လေးများမှာ ယခုအခါ သင်၏ မျက်နှာပေါ်တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြပါတယ်။ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ ပကတိမျက်စီဖြင့် မမြင်ရသော အကောင်ငယ်လေးများကို စမ်းသပ်ခဲ့သည့် လူအားလုံးတွင် ရှိနေပြီး Demodex ဟု ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အဆိုပါ အကောင်ငယ်လေးများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ စိမ့်ထွက်သော အဆီများကို စားသုံးကာ နေထိုင်လျှက်ရှိကြပါတယ်။
Ref : Mail Online